Uyigcina njani idatha kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Abalandeli ▷ ➡️
Thenga Abalandeli 😍
Abalandeli beTik Tok
Uyigcina njani idatha kwi-Twitter?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 259
Xa ufaka iakhawunti yakho ye-Twitter unokufumana iyantlukwano enkulu yeeTweets ngamawaka omxholo. Amakhulu kunye namakhulu opapasho ayenziwe naphina emhlabeni kunye nazo zonke iintlobo zolwazi, ezifumanekayo kubo bonke abasebenzisi abaxhumeneyo phakathi kweeakhawunti zabo.
Unjalo ke umthombo wolwazi owufumana kwiinethiwekhi zonxibelelwano, ukuze uchithe ixesha elininzi kubo nakwi-Twitter, ixesha linokuthi "libhabhe" ngokuzama ukugcina iiTweets ezingaze zigqibe ukufika.
Ngapha koko, i-500 yezigidi zeTweets zipapashwa mihla le ezikhuthaza amakhulukhulu eendlela kuwo onke amazwe, ke ukuba ufuna ukugcina usesikhathini kwiqonga, kuya kufuneka badle iiyure zosuku lwakho. Ke ngoko, ukuba awunalo unxibelelwano lwe-intanethi olulungileyo nolungenamda, ngekhe ube nakho ukusebenzisa yonke imixholo.
Yeyiphi imixholo edla elona nani likhulu ledatha?
Phakathi kwawo wonke umxholo onokuwufumana kwi-Twitter, kwiiVidiyo nakwii-GIFS ngabo badla eyona datha. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ngokonyuka komgangatho weqonga lokusingatha iividiyo zesisombululo se-pixel ephezulu.
Kwelinye icala, iividiyo eziphilayo nazo zisebenzisa idatha eninzi, ubukhulu becala xa ezi zinokuhlala ngaphezulu kweyure, kuxhomekeke kubume bokudlulisa.
Kwimeko apho ungenalo olu hlobo lonxibelelwano kwaye kuya kufuneka wenze uninzi lweedatha zefowuni yakho, unokuzixhasa kwicandelo "Isigcini senkcukacha".
Icandelo "gcina idatha" ngumsebenzi obaluleke kakhulu kwiifowuni eziphathwayo, Imigca yayo ixhomekeke kwirente yedatha encinci, ngamanye amaxesha ebiza kakhulu. Ayitsho ngaphandle kokuba ngumsebenzi okhethekileyo weApp.
Kuxhomekeka eqongeni, lo msebenzi ubeka imida yendlela apho Twitter inenye idatha kwinethiwekhi yakho. Ke ifuthe kuzo zonke iiakhawunti ezinxulunyaniswa neakhawunti apho uqwalasela umgcini.
Khangela umsebenzi we "Data Saver"
Lo msebenzi kulula ukufumana, zombini kuguqulelo olupheleleyo nakwinguqulelo elula yeApp, indlela iyafana.
Ngena kwiakhawunti yakho I-Twitter ilandela inkqubo yesiqhelo.
Xa ufaka iakhawunti yakho, uya kuzifumana ngokwamaxesha ikakhulu. Cinezela ifoto yeprofayile yakho kwaye kwangoko itab enamacandelo aliqela iya kuboniswa, apho ungabona khona icandelo "Ugcino lwedatha"
Uza kufumana ntoni kulo msebenzi?
Ngaphambi kokungena kweli candelo, uza kubona iqhosha ukuze usebenze. Nje ukuba ungene, uya kufumana ibhokisi yokuvula idatha
Elinye icandelo lokugcina idatha yakho liya kuthi "ukudlala ngokuzenzekelayo." Kweli candelo uya kuba nakho ukugqiba ukuba iividiyo kunye nee-GIFS ziphinde zenziwe ngokuzenzekelayo kwisixhobo sakho nakuzo zonke iiakhawunti onazo.
Unokukhetha phakathi "Kwiselfowuni okanye kwinethiwekhi yeWi-Fi", "Kuphela ngeWi-Fi" kunye no "Ungaze" Cinezela leyo uyiqwalaselayo, kuxhomekeke kuhlobo lonxibelelwano onalo.
1 Yeyiphi imixholo edla elona nani likhulu ledatha?
2 "Ugcino lwedatha"
3 Khangela umsebenzi we "Data Saver"
4 Uza kufumana ntoni kulo msebenzi?
Iileta ze-Instagram ukusika nokuncamathisela
Meyi 11, 2021
Ungazicima njani izimvo kwisiteshi sam seYouTube?
Uzijonga njani iiseshoni zeakhawunti yakho ye-Twitter?
Abalandeli be-Instagram $0.00
Abalandeli 😍 $0.00
Abalandeli bakaTwitter $0.00
Abalandeli beTik Tok $0.00
Abalandeli bakaFacebook $0.00
Ababhalisi be-YouTube $0.00
Oktobha 2, 2019
Iileta ze-Instagram ukuya kuKopa kunye nokuncamathisela
NgoJanuwari 20, 2019
Yaziwa ngamagama amakhulu e-Instagram
NgoJanuwari 28, 2019
Ngena kwi-Instagram ngaphandle kwekhowudi yokuqinisekisa
Julayi 12, 2019
Xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki
NgoFebruwari 28, 2019
Abalandeli be-Instagram Generator
Ukwazi uKhenketho lweUSA